I-Tenerife iyisiqithi seIziqithi zeCanary (ISpain). Ngommandla we-2,034.38 km² kunye nabemi base-894,636 abemi (2017) sisiqithi esikhulu kunazo zonke kwisiqithi saseCanada kunye nabantu abaninzi eSpain.
Indlunkulu yesi siqithi kunye nayo yonke indawo yase-Canarian iSanta Cruz de Tenerife. Isixeko saseSan Cristóbal de La Laguna siye safumana indawo yoLuntu lweMveli kusukela ngu-UNESCO ngo-1999.
I-Tenerife yi-volcano yeTeide, e-3,718 yamitha ephakamileyo e-Spain kunye neyesithathu enkulu intaba-mlilo ehlabathini ukusuka kwisiseko sayo elwandle. I-National Park yeTeyi nayo iHlabathi leMveli kwiNhlaba kusukela ngo-2007.